Ukulungiselela isivumelwano sokuhlawula? Singakunceda
Umthetho oManyeneyo » Isivumelwano sokuHlaliswa
Isivumelwano sokuhlawula uhlobo olukhethekileyo lwesivumelwano. Kwisivumelwano sokuxazulula, amaqela anenjongo yokwenza izivumelwano malunga nokusonjululwa kwembambano okanye enye imeko engaqinisekanga. Ikwangisivumelwano ukuba umqeshi kunye nomqeshwa banokuzisebenzisa ngokuzithandela, ngesivumelwano esinye, ukuphelisa isivumelwano sengqesho.
UKUVUMA ISIVUMELWANO SOKUFUNDA?
IINGXAKI ZEMVA KOKUZIPHATHA
Isivumelwano sokuhlawula uhlobo olukhethekileyo lwesivumelwano. Kwisivumelwano sokuxazulula, amaqela anenjongo yokwenza izivumelwano malunga nokusonjululwa kwembambano okanye enye imeko engaqinisekanga. Ikwangisivumelwano ukuba umqeshi kunye nomqeshwa banokuzisebenzisa ngokuzithandela, ngesivumelwano esinye, ukuphelisa isivumelwano sengqesho. Isivumelwano sokuphelisa sinokugqitywa ngazo zonke iintlobo zeembambano, kodwa sihlala sisetyenziswa kwiimeko zokugxothwa.
Yintoni isivumelwano sokuhlawulwa?
Xa isivumelwano sokupheliswa kugqityiwe, umqeshi akanyanzelekanga ukuba afumane imvume yokugxothwa komqeshwa kwi-Arhente yeinshurensi yabaqashi yeDatshi (UWV) okanye kwinkundla engezantsi. Esi sisizathu esibalulekileyo sokuba abaqeshi kunye nabasebenzi kwezinye iimeko bathande ukuphelisa isivumelwano sengqesho kwisivumelwano sokudibanela kwisivumelwano sokuhlawula ityala. Esinye isizathu esibalulekileyo sokukhetha isivumelwano sokuhlala yinto yokuba ukupheliswa kwemvumelwano yokuqeshwa kunokucwangciswa ngokukhawuleza nangokulula. Oku kwenza umahluko obonakalayo kwiindleko zomthetho kwaye ke kuluncedo kuwo omabini amaqela. Nangona kunjalo, kulunge ngakumbi kuwo omabini amaqela ukufikelela kwizivumelwano ngenkxaso yegqwetha. Ngaba ungathanda ukwenza isivumelwano sokuxazulula esiya kuthintela iingxaki zomthetho ezizayo? Nceda unxibelelane Law & More.
neengxaki zeklayenti lakhe ”
Umxholo wesivumelwano sokuhlawula ityala
Kwisivumelwano sokuhlawula amatyala, phantsi kwemiqathango yokupheliswa kwesivumelwano sengqesho. Umxholo ngqo wesivumelwano sokuhlawula uxhomekeke kwimeko ethile kunye neemeko. Nangona kunjalo, kukho inani lezinto ezisoloko zichaziwe. Okokuqala, umhla wokupheliswa yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwisivumelwano sokuhlala. Okwesibini, ixesha lesaziso kufuneka lithotyelwe. Okokugqibela, kufuneka kwenziwe izivumelwano ngokubhekisele kwixesha elisaseleyo kude kube ngumhla wokupheliswa. Kungenzeka ukuba ixesha lokuxolelwa emsebenzini kuvunyelwene ngalo. Kwimeko enjalo, umqeshwa akasasebenzi, kodwa ilungelo lakhe lokufumana umvuzo lihlala.
Izivumelwano zingenziwa malunga nokushiyeka kwekhefu elingahlawulwanga kwaye nayiphi na enye indawo yokuhlala, enjengekomishini, izikimu zebhonasi okanye izikimu zokwabelana. Ukongeza, isixa sesibonelelo senguqu esigqitywe kuthethwano phakathi komqeshi nomsebenzi siya kubekwa phantsi kwisivumelwano sokuhlawula ityala. Isixa sesibonelelo sokutshintsha sihlala siphantsi kothethwano kwaye ngokuqinisekileyo sibalulekile. Kuya kuba bubulumko ukufuna uncedo lwezomthetho kule nto. Iqela lethu lingakuvuyela ukukunceda.
Iimeko ngokubhekisele kwisivumelwano sokuhlawula ityala
Umsebenzi unelungelo elisemthethweni lokurhoxisa isivumelwano sokuhlala esisayiniweyo kwisithuba seeveki ezimbini. Umqeshi kufuneka abandakanye ilungelo lokuyeka emsebenzini kwisivumelwano. Ukongeza, xa kugqitywa isivumelwano sokuhlawula, ukukhutshwa kokugqibela kunikezelwa phakathi kwamaqela. Oku kuthetha ukuba umqeshi kunye nomsebenzi abasakwazi ukubanga nantoni na komnye komnye ngaphandle kwaleyo ibekwe phantsi kwisivumelwano sokuhlawula ityala. Ukukhutshwa kokugqibela kubandakanywa ukuphela kwesivumelwano.
Ilungelo lokufumana inzuzo
Isivumelwano sokuhlawula isigxina kufuneka sisoloko sichaza ukuba umqeshi uthathe inyathelo lokuphelisa ingqesho. Umsebenzi ke uya kungabinamisebenzi. Oku kubalulekile ukuze umsebenzi abe nelungelo lokufumana isibonelelo sokungasebenzi. Kuya kuhlangatyezwana nale mibandela ilandelayo ukuqinisekisa ukuba umqeshwa unelungelo lokufumana isibonelelo sokungasebenzi:
Umqeshi ucele umqeshwa ukuba avume ukugxothwa;
• isivumelwano sokuhlala sithathela ingqalelo ixesha lesaziso;
• umsebenzi unokubonisa ubungqina bokuba uphandiwe kwaye ufuna umsebenzi omtsha.
Ingcebiso-uthethathethwano-ukuzoba isivumelwano sokuhlala
Iqela lethu liya konwaba kukucebisa, ukuthethathethana kunye nokwenzela isivumelwano sonke sokuhlala kwakho. Sicebisa ngokufaneleka kwesivumelwano sokuhlala kwaye sinika ukucaca. Sikwajongisisa iminqweno yakho ethile kwaye siqinisekise ukuba ufikelela kwisigqibo esenziwe kakuhle kunye nesigqibo esifanelekileyo. Xa usenza uthethathethwano, sinceda ukuba ufezekise iziphumo ezifanelekileyo zezemali ngemeko efanelekileyo